समसामयिक – Page2– Ram Kumar Pariyar
पृथ्वीनारायण शाह नेपाल भित्रको सानो पहाडी राज्य गोरखाका राजा नरभुपाल शाह तथा रानी कौसल्यावतीका छोरा थिए । वि.सं. १७७९ मा यिनको जन्म भएको थियो । वि.सं. १७९९ मा बिस बर्षको उमेरमा पृथ्वी नारायण शाह गोरखाका राजा भएका थिए । आधुनिक नेपालका जम्मदाता हुन यिनले...
लिम्बुवान त्यसै उत्पति भएको वा कसैले राखिदिएको कुनै जाति वा समुदायको नाम होइन । यो त किरात सभ्यतामा किरात भूमिको राजनैतिक क्रान्तिले जन्माएको नाम हो । आजको लिम्बुवान भूमिलाई लिम्बुवान भन्नुभन्दा पहिले फेदाप भनिन्थ्यो । सिमाङ्गढबाट लुक्थोयोको नेतृत्वमा पूर्व बिजुगखोला आउने सौमर किरात वंशमध्ये...
मानव समाजमा कसैलाई होच्याएर मूल्याङ्कन गर्दा पशुको उपमा दिइने गरिन्छ । तर ‘दलित’ समुदायका मान्छेलाई पशुको भन्दा तल्लो व्यवहार गरिंदा पनि उनीहरु यो समाजमा बाँचीरहन विवश रहेको छ्न । एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई छोएमा जात जाने यो प्रचलन नेपाल र भारतका हिन्दु समुदाय बाहेक...